တွေးမိတွေးရာ...... .ရေးမိရေးရာ စာများ.: May 2007
တကယ်တော့ ၀ိုင်ဝိုင်းရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်လောက်တောင်မှ ကိုယ့်ကို ဖြေသိမ့်မှု ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့ ချစ်သူကို ဘာအတွက် တမ်းတနေရဦးမှာလဲ..။
ဒီသီချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပဲ.. ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးရမှာပေါ့။ ဘာဆန်းလဲကွယ်..။ အရင်လည်း တစ်ယောက်တည်း..။ ခုလည်းတစ်ယောက်တည်း။
တကယ်တော့ ပူလောင်သော ဆူပွက်သော.. တုံ့ပြန်မှုအင်မတန် မြန်သော ကိုယ့်အတွက် သူဟာ အေးစက်သော.. ကိုယ့်ကိုဘယ်တော့မှ နားမလည် နိုင်သောလူတစ်ယောက်ပါပဲ..။ သူကိုယ့်ကို ဘယ်တော့မှ လည်း သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ဘာဖြစ်နေလဲ.. ဘာလိုအပ်နေလဲ ဘယ်တော့မှ သိမှာမဟုတ်ဘူး..။ တခါတရံ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တောင် နားမလည် နိုင်တာမို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ လည်း ထူးပြီး အပြစ်မမြင်လိုတော့ပါဘူး..။ သီချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးရတော့မယ်..။
အားလုံးပြီးဆုံးသွားတော့.. ရင်တစ်ခုလုံး ကြေသွားလား..
ဆုံးရှုံးခြင်းက တို့တွေ ပြေးမလွတ်နိုင်
မောပန်းလွန်းတဲ့ မင်းရဲ့ လိပ်ပြာလေး...
ခုလည်း ဒီလိုပဲ.... အောင်မြင်လိုက်ရှုံးနိမ့်လိုက်..
အက်ကြောင်းလေးက အမြဲတမ်း အမှတ်တရပေါ့။
ရှေ့ဆက်ရမယ့် မင်းရဲ့ ဘ၀သစ်အတွက်
သူငယ်ချင်း ရှေ့ဆက်မင်းဘ၀ဟာ အမြဲချိုမြိန်ပါစေ
အောင်မြင်ပါစေ.. တခါတရံမှာ ခါးသီးလည်း ဖြေသိမ့်လိုက်ပေါ့လေ..။
ဟိုအရင်ချိန်က ကြေကွဲခြင်း မင်းမျက်ရည် မြစ်ပြင်ကျယ်မှာမျော
ပင်လယ်ထိ စီးပါစေ.. အားတင်းကာ လျှောက်လေ..။
Posted by Maw at 5:18 AM 1 comments
Labels: ကျွန်မနှင့် အချစ်, သီချင်းများခံစားခြင်း
မာမယောင် နဲ့ အင်မတန် ပျော့ညံ့လှတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်တွေ .. အင်း..။ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားကိုးလိုစိတ်ကို အမြဲမွေးထားမှ ဖြစ်မယ် လို့ သိမှတ်မိတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲ။ ချစ်သူဆိုတာ တခါတလေတော့ ကိုယ့်အတ္တထက် ဘယ်သူ့ကိုမှ ပိုမချစ်နိုင်တဲ့ လူ့သဘာဝအရ သူတို့ရဲ့ အတ္တတွေကို ရှေ့တန်းတင်တဲ့အခါမျိုးမှာ.. ကိုယ့်ရှေ့က ရပ်တည်ပေးနိုင်မယ့် လူမျိုးတွေ မဟုတ်ပြန်ဘူးကွယ်...။ ကိုယ့်ဘေးက ဖေးမကူညီမယ့်လူမျိုး မဟုတ်ပြန်ဘူး။
ကိုယ် ကိုက အတ္တတကြီးသူတွေနဲ့ ပဲ ဆုံနေရတာလား။ ဒါမှ မဟုတ် ကိုယ်တိုင်ကပဲ အတ္တကြီးလွန်းပြီး သူများဆီက အများကြီး မျှော်လင့်ထားမိတတ်တာလား မသိတတ်တော့ဘူး။ ဘယ်သို့သော ချစ်သူကမှ ဘ၀မှာ တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်နေရတာကို နှစ်ယောက် အဖြစ် လာရပ်တည်ပေးလိမ့်မယ်ရယ်လို့ တွေးထင်ထားလို့မရတာကိုက လုံခြုံရာမဲ့ပါတယ်။
မျှော်လင့်ထားတာ များလေလေ.. အားကိုးလိုစိတ်များလေလေ.. တစ်ယောက်တည်းဖြစ်ရလေလေပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်ဘဲလည်း ချစ်သူတစ်ယောက်ကို ကိုယ်မလိုအပ်ပါဘူးလေ..။ ချစ်ရတာကို မုန်းပါတယ်။ မချစ်ချင်ပါ။ မချစ်လိုတော့ပါ။ ကိုယ်သိတဲ့အချစ်ဆိုတာ .. လူကို သတ္တိတွေ တိုးသွားစေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ.. ပျော့ညံ့တဲ့ အသုံးမကျတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ကိုပဲ အမြဲ တွန်းပို့နေတတ်တယ်။ ကိုယ်မချစ်တတ်တာပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဟာ အသုံးမကျတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ။
Posted by Maw at 4:50 AM0comments
Labels: ကျွန်မနှင့် အချစ်
Feeling Love and I
အချစ်ဆိုတာ တကယ်တော့ အလကား။
တစုံတယောက်က တစုံတယောက်ကို ချစ်ခြင်း ဆိုတာကို ဘယ်လိုအဓိပါယ်ဖွင့်ကြမလဲ..။
ဂျူးရဲ့ တစ်ခုသော ၀တ်ထုထဲမှာတော့ နှလုံးသားနှစ်ခု တစ်ခုတည်းလို ခုန်ခြင်းတဲ့။ အဲဒါအလကား..။ သိပ်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်။
နောက်တစ်ခုမှာတော့.. လူတကာတို့ ပြောလေ့ရှိတဲ့ ပေးဆပ်ခြင်းလား၊ ရယူခြင်းလား ဆွေးနွေးထားတာ။ ကိုယ်ပြန်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်လေ..။ သည်ဘလောဂ်တစ်နေရာမှာပါပဲ..။
တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ ခံစားချက်သက်သက်ပါ။ ဟုတ်လိုက်လေ....လူတိုင်းသည်လိုပြောကြတာပဲ..။ မြန်မာသဒါမှာတော့ စိတ်တဇနာမ်အုပ်စုထဲမှာပါတယ်လို့ သင်ခဲ့ဖူးတယ်..။
သံယောဇဉ်ကနေ ချစ်ခြင်းဖွဲ့တည်တတ်တယ်ဆိုရောစးင်လည်း နာကျည်းစရာတစုံတရာကနေ ပျောက်ကွယ် သွားနိုင်တယ်။ ရင်ခုန်ရင်အချစ်ဆိုပြန်တော့ ရင်ခုန်တုန်းခဏတော့ သတိတွေတရရစွဲလန်းနေသလိုလို .. အချိန်တွေကြာလာတော့ လည်း မတွေ့ရတာကြာတော့ မှုန်ဝါးသွားပြန်ရော..။ ဒီလိုဆို မကြာမကြာ တွေ့ဆုံဖြစ်ဖို့လိုပြန်ရောလား..။ နေဦးနေဦး.. ဘာအတွက် အချစ်လိုအပ်သလဲ..။ ကိုယ့်နှလုံးသားကြီးက မာတာတာကြီးထင်ပါရဲ့..။ နူးညံ့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အချစ်ကို လိုအပ်သလား..။ အချစ်က ဘာတွေများ လုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်..။ ပြန်စဉ်းစားတော့ အဲသလိုအချစ်တစ်ခုကြောင့်ပဲ..ကိုယ်ဟာ နူးညံ့စွာ ပြုံးတတ်ဖူးတယ်..။ အဲသည် အချစ်တစ်ခုကြောင့်ပဲ.. နာကျင်စွာငိုဖူးတယ်..။ ပူပြင်းလောင်ကျွမ်းခံစားခဲ့ဖူးတယ်..။ အဲသည်အချစ်ကြောင့်ပဲ..။ ကိုယ်ဟာ ခပ်မာမာမိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရတာ။ ချစ်ခဲ့ရတာဘယ်လိုပါလိမ့်.. ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ တခါတလေ.. အပြန်အလှန်ဂရုစိုက်ကြင်နာမှုများနဲ့ နွေးထွေးပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတာ အချို့လည်း အမှတ်ရစရာကျန်တယ်..။ ဒါက တစ်ခါတုန်းက..။
အချစ်ဆိုတာ ပေးဆပ်ခြင်းလား။ ပေးစရာမရှိပါ။
အချစ်ဆိုတာ ရယူခြင်းလား။ လိုချင်တာမရှိပါ။
အချစ်မရှိတဲ့။ အချစ်ကို ခံစားကြည့်လို့မရတဲ့ နှလုံးသားမှာ ဟာတာတာနဲ့.။
ကိုယ် ချစ်တတ်ချင်တယ် ။ အချစ်ခံချင်တယ်.. ။ ဒါက ကိုယ့်ဆန်ဒသက်သက်..။ တကယ့်တကယ်မတော့.. ကိုယ်က မချစ်တတ်တော့ဘူး..။ ကြိုးစားပြိး ချစ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တောင် ချစ်လို့ မတတ်တော့ဘူး..။ အချစ်ခံရဖို့ကြပြန်တော့.. ကိုယ်ဟာ ချစ်ချင်ဖွယ်ရောစးောစား မိန်းကလေးတစ်ယောက် မဟုတ်ပြန်ဘူး...။ စရိုက်က မာဆတ်ဆန်၊ စကားပြောတော့ ထောင့်မကျိုး..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် က အထင်ကြီးတတ်သေးတယ်..။ နောက်ပြီး မယုံလွယ်သူ။ မသိမ်မွေ့သူ။ ယောက်ျားတစ်ယောက် ချစ်ခင်ကြင်နာချင်စရာ မသိနားမလည် အပြစ်ကင်းတဲ့ မျက်လုံးမျိုးကလေးလည်း မရှိ ..။ အဲသလိုမျက်လုံးမျိုးကလေးနဲ့သာဆိုရင်.. အားနွဲ့သူမိန်းကလေး ဆိုပြီး ကြင်နာချင်စရောစားကောင်းဦးမယ်.. ခက်တာက အဲသလိုမျိုး မဟုတ်ခဲ့တာ အတော်ကြာခဲ့ပြီ..။ ကိုယ့်ကို သိလွန်းလို့ ကိုယ့်ချစ်သူက ကြောက်စရာကောင်းတယ် ပြောဖူးတယ်..။ သိတယ်ဆိုတာ.. သူ့ကို အကြိမ် အတော်များများ ထွင်းဖောက်သိနေတာမျိုး..။ သူညာရင်လည်း သိတာပဲ..။ သူတစ်ခုခုအခက်ကြုံနေရင်လည်း သိတာပဲ..။ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအချို့ရောစဲး့သဘောထား..လူ့စရိုက် .. ဘယ်သူကဖြင့် အန္တရယ်ရှိတဲ့ အပေါင်းအသင်းမျိုး.. ဘယ်သူကဖြင့် ကိုယ့်ကို အသုံးချမယ့်သူ.. စသဖြင့်..။ မိန်းမတစ်ယောက် အဲလောက် ဖြစ်နေရင် နည်းနည်းမှာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းတော့မှာမဟုတ်တာကတော့ သေချာတယ်..။ ကြောက်စရောစားပဲကောင်းနေမယ်..။ ရယ်ရတယ်..။ ကိုယ်တော့ ဒုက်ခပဲ..။ ကိုယ်ကလည်း မသိချင်ဘူး..။ ခက်တာက ဘ၀ကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေ အများကြီးနဲ့ မို့ မသိချင်ဘဲနဲ့တောင် အတော်ကလေး သိပြီး နေတာမို့.. သံသယတွေနဲ့.. သတိထားမှုတွေနဲ့ လက်နေတတ်တဲ့ ကိုယ့်မျက်လုံးများဟာ ယောက်ျား တစ်ယောက်အဖို့ ရင်ခုန်စရာမကောင်းတာတော့ အမှန်ပဲ..။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်အမွှန်းတင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး..။ ကိုယ့်ထက် သိပ်တော် သိပ်ထက်တဲ့ မိန်းမတွေ အပုံကြီးရှိမှာပါ..။ ကိုယ်ညံ့နေတာတွေလည်း တပုံကြီးရှိပါတယ်..။ ဒါပေမယ့်.. ဘာမှ သိပ်မသိလှတဲ့ ခပ်နုံနုံ သာမန်မိန်းမတစ်ယောက် ပဲဖြစ်ချင်တော့တယ်..။ သိရတာပင်ပန်းတယ်..။ ညာတာတွေကို ယုံတတ်ချင်တယ်။
တကယ်မကြင်နာဘဲ ကြင်နာဟန်ဆောင်တာမျိုးတွေကိုလည်း သိမနေချင်ဘူး..။ တကယ်လို့ပဲ ထင်ပြီး နူးညံ့ခံစားချင်တယ်..။ ခံစားလို့မရလောက်အောင် သံသယကြီးသူ ကိုယ်ဖြစ်နေတာကိုက စိတ်ကုန်စရာ ကောင်းလှပြီ. ။ ကိုယ်အညံ့ဆုံးအချက်က ဟန်မဆောင်တတ်တာ..။ မသိချင်ယောင်များ ဆောင်တတ်ရင် ကောင်းမယ်..။
Posted by Maw at 5:39 AM0comments
Posted by Maw at 5:30 AM0comments
Labels: ဖတ်မိဖတ်ရာ ထိုထိုစာ
သဘောကျ နှစ်သက်မိတဲ့ သီချင်း လေး တစ်ချို့ကို ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ စုထားချင်တယ်..။ ခု စမှာက Christina Aguilera (ခရစ်စတီနာ အော်ဂလီဆန် လို့.. ကိုယ်က နောက်ပြီးခေါ်တယ်.. ခေါ်ရခက်လို့လေ...။ အဟိ..) ရဲ့ အဲသည်သီချင်းလေးကို ကိုယ်သိပ်သဘောကျတဲ့ မူလန် ကာတွန်းကားထဲမှာလည်း သုံးထားသေးတယ်..။ စာသားနည်းနည်းပြင်ထားတယ်..။ အဲသည်ထဲမှာကျတော့..။
Look at me.. You may think you see
ခုတော့ ကိုယ်ပြောချင်တာတွေ ပြောတယ်.. လုပ်ချင်တာတွေလုပ်တယ်.. နေချင်သလို နေကြည့်လာတယ်..။ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းတွေ အားမနာဘဲ ဆက်ဆံကြည့်လာတယ်..။
ရလာဒ်ကတော့.. ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းတွေသည်းမခံနိုင်ကြတော့ဘူး..။ ရယ်စရာတော့ ကောင်းသား..။ အပေါ်ကအုပ်ထားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအလွှာတွေကို ခွာထုတ်ပြီး.. စိတ်ထဲက ဖြစ်တဲ့အတိုင်းတွေ ပြောဆိုဆက်ဆံကြရင် ကဘာကြီးဟာ ဘယ်လိုများဆက်ပြီး ကိုယ့်အတွက် ဆိုးသွားဦးမလဲမသိ..။ ဒါပေမယ့်.. ဖောက်ထွက်ကြည့်ရမယ်..။
((((((((( why must we all conceal...
Must there be.......asecret me..
I’m forced to hide? ...........))))))))))))
Celine Dion ရဲ့ Because You Loved Me
အချစ်ခံရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံမှု ကို ခံစားရတယ်..။
ဘယ်သူကများ ကိုယ့်ကို အဲလောက် ချစ်နိုင်မလဲ...။
ချစ်တဲ့သူရှိရောစုးံနဲ့လည်း သည်လိုပြီးပြည့်စုံမယ် မဟုတ်ဘူး..။ အချစ်ခံရောစးခြင်းကို ကိုယ်တိုင်က ကျေနပ်နှစ်သက်ပါမှ သည်လိုနူးညံ့လှပတဲ့ ချစ်ခြင်းတစ်ခု အပြန်အလှန် ဖြစ်တည်လာမယ်..။
ခုတစ်ပုဒ်ကတော့ Christina ရဲ့ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ နောက်တစ်ပုဒ် ..။
I feel like I've been locked up tight for a
Baby baby baby (baby baby baby)
Music's playing and the light down low
But that don't mean its gotta be tonight
If you wanna be with me I can make your wish come true
Gotta rub me the right way honey (If you wanna get with me)
I can make your wish come true (Oh)
Just come and set me free baby I'll be with you
Holdin' hands, makin' plans and it's lucky for me you understand
No all the time i was blind
But baby you knew me better,then i knew myself
If it comes back it's yours
And you're ready and willin'
To give me more than
And I'm thanking you for knowin' exactly
And I'm thanking you for givin to me
ohh baby ohh darling
somebody sensitive,crazy,sexy cool like you
Somebody who can come and blow her mind like you do
you letagirl know how much ya care about her
i swear your the one who always knew!
And I'm thanking you for being there for me
Whatever keeps me in your arms (Whatever keeps me in your arms is what I need)
And I'm thanking you for knowin' exactly me
And I'm thanking you for givin' it
for givin' me what i want and what i need
Posted by Maw at 11:28 PM0comments